TALLAABO QALLOOCAN: Xasan Sheekh iyo hoggaanka NISA | KEYDMEDIA ENGLISH
TALLAABO QALLOOCAN: Xasan Sheekh iyo hoggaanka NISA
Khaddar Sanka, wuxuu ahaa shaqsiga Fahad iyo Farmaajo u qaabilsan dhibaateynta shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee adeegsanaya garoonka diyaaradaha, si gaar ah, wuxuu u xil-saarnaa, ka war qabka shaqsiyaadka u socdaalaya Gobolka Gedo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey), oo ka mid ah haraadigii nadaamkii Farmaajo, ayaa xil ka qaadis ku sameeyay Taliyaha NISA ee Garoonka Aadan Cadde, oo lagu magacaabo, Khadar Maxamuud (Khaddar Sanka).
Xil ka qaadista, Khadar, ayaa ku soo beegantay saacado kadib, markii ay kulan yeesheen, eedeysane Yaasiin Farey oo sifo sharciga baal marsan ku jooga Xaafiiska ugu sarreeya NISA iyo Madaxweynaha dhawaan-galka ah, taasoo loo fasirtay in amarka xil ka xayuubinta uu ka yimid dhanka Xasan Sheekh, waxayna arrintaasi abuurtay dood xooggan.
Khaddar Sanka, wuxuu ahaa shaqsiga Fahad iyo Farmaajo u qaabilsan dhibaateynta shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee adeegsanaya garoonka diyaaradaha, si gaar ah, wuxuu u xil-saarnaa, ka war qabka shaqsiyaadka u socdaalaya Gobolka Gedo, lama huraan ayayna ahayd in xilka uu ku magacaawnaa laga raacdeeyo.
Yeelkeede, Yaasiin Farey, oo ka mid ah eedeysanayaasha kiiska Ikraan Tahliil, wuxuu qudhiisu lumiyay xilkii KMG ahaa ee NISA, kadib markii loo dhaariyay xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka 11-aad ee JFS, sida sharcigu dhigayo, Xildhibaanku markii la dhaariyo, wuxuu weynayaa xilkii uu hore u hayay inta Wasiir ka ahayn.
Sidaas daraaddeed, waxaa abuurantay dood xooggan, oo sheegeysa sababta Madaxweyne Xasan oo indhaha lagu hayo tallaabooyinka 1aad oo uu qaadayo uu u doortay in Farey oo aan xil heyn, uu ku amro inuu xil ka qaadis ku sameeyo, Taliye ka tirsan hay’adda Nabad-sugidda, xilli la sugayay inuu is-baddel guud iyo dib-u-habeyn xooggan ku sameeyo NISA.
Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa looga fadhiyaa inuu sharci u sameeyo, NISA, oo aan waligeed sharci loo sameyn, inuu ku celiyo shacab-nimadeedi, booliska hoos geeyo, meeshana ka saaro hoggaanka iyo saraakiisha hay’addii Sir-doonka Qaranka u baddelay, hay’ad ku milan siyaasadda oo kaliya u taagan qabashada howlo siyaasadeed.